Xildhibaanada Koofur Galbeed oo kulankooda ugu horeeya Mooshin xil ka qaadis ka keenaya Shariif Xasan | Baled Weyn Media Center
Xildhibaanada Koofur Galbeed oo kulankooda ugu horeeya Mooshin xil ka qaadis ka keenaya Shariif Xasan
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Koofur Galbeed ayaa sheegay in kulankooda ugu soo horeeya oo furmi doona 16-ka bishan ay Mooshin xil ka qaadis ka keeni doonaan Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada ayaa sheegay in wadaan dhaq dhaqaaqii ugu dambeeyay oo ay mooshin uga keenayaan Shariif Xasan.
Xildhibaan Dhubax Maxamed Dhaqane oo ka mid ah Baarlamaanka Koofur Galbeed oo wareysi siiyay Idaacada Kulmiye ayaa ku eedeeyay Shariif Xasan inuu ku fashilmay waxyaabihii loo igmaday, dib u dhacyo iyo horumar la’aan ay ka jirto deegaanada Koofur Galbeed 3-dii sano ee uu xilka hayay.
Waxaa uu sheegay inay doonayaan is bedel u horseedaan maamulka Koofur Galbeed, gaar ahaan hoggaanka maamulkaas.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada Baydhabo, kaddib safar uu dibadda uga maqnaa, waxaa uu qiray inuu kala aragti duwanaan uu u dhaxeeyo dowladda Federaalka.
Khilaafka dalalka Khaliijka ayaa saameyn ku yeeshay xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya, iyadoo maamul goboleedyada ay ka hor yimaadeen mowqifka dhex dhexaadnimada ee dowladda Federaalka ka qaadatay xiisada Khaliijka.
Magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho ayaa waxaa ka socda kulamo iyo dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed oo xoog leh, iyadoo mowjadaha siyaasadeed ee ka jira maamul goboleedyada la sheegay inay hurinayaan xubno ka tirsan dowladda oo qorsheynaya inay meesha ka saaraan Madaxda xilka ku raagay.